चितवन र झापा एफसी बीच ऐतिहासिक साझेदारी – Khel Dainik
चितवन र झापा एफसी बीच ऐतिहासिक साझेदारी
काठमाडौं (खेलदैनिक) । केही महिना अघि सम्पन्न नेपालको पहिलो फ्रेन्चाईज लिग नेपाल सुपर लिग खेलेको एफसी चितवन र नेपालकै पहिलो निजी फुटबल क्लब झापा एफसीबीच ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी भएको छ ।
मंगलबार दुवै क्लबले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालब फेसबुकमार्फत नेपाली फुटबलको विकासका लागि दुई क्लबबीच सम्झौता भएको कुरा घोषणा गरेका हुन ।
स्मरण रहोस, एएफसी लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक सचिन्द्र धिमालको प्रशिक्षकीय जिम्मेवारीमा रहेको झापाले यहि भाद्र १० गतेदेखि शुुरु हुन गईरहेको शहिद स्मारक सी डिभिजन लिगमा सहभागिता जनाउँदैछ ।
सम्झौतामा के छ ? के भन्छन् दुवै क्लब?
दुवै क्लबबीच भएको सम्झौता अनुसार सी डिभिजन लिग छनौट खेल्ने झापाले आफ्नो जर्सीमा आईएमई समूहको लोगो प्रयोग गर्नेछ । दुवै क्लबबीच खेलाडी साटफेर कार्यक्रम पनि हुनेछ । झापाले आफ्नो जिल्लामा एफसी चितवनबारे प्रचार प्रसार गर्नुका साथ क्लबको प्रवद्र्धन समेत गर्नेछ ।
त्यसमध्ये सम्झौताको मुख्य पाटो भनेको झापाका क्षमतावान र प्रतिभाशाली खेलाडीहरुले एफसी चितवनमा ट्रायल दिन पाउने छन् । ट्रायलमा उत्तिर्ण हुने उत्कृष्ट खेलाडीहरुले एफसी चितवनमा आवद्ध भएर नेपाल सुपर लिग खेल्ने अवसर समेत पाउने छन् ।
यो ऐतिहासिक साझेदारीलाई लिएर दुवै क्लब खुशी पनि देखिए । एफसी चितवनका अध्यक्ष सचिन ढकाल भन्छन्, “झापा एफसीसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी निकै उत्साहित छौं । यो सहकार्यले दुवै क्लबलाई फाईदा पुग्नुको साथै नेपाली फुटबलको विकासमा पनि सहयोग पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।”
उता झापा एफसीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता सुजन गौतम पनि यो साझेदारीलाई लिएर खुशी र उत्साहित देखिए । उनी भन्छन्, “हाम्रो योजना, उद्देश्य र भिजनमाथि विश्वास गर्ने एफसी चितवनप्रति हामी विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं । नेपाल सुपर लिग खेल्ने क्लबबाट यस किसिमको सहयोग र समर्थन पाउँदा हामी निकै उत्साहित पनि छौं ।”
← उज्वेकिस्तानमा नेपालले खेल्ने मिति, समय र खेलस्थलको घोषणा साफ च्याम्पियनसिपका लागि माल्दिभ्सले पायो नयाँ प्रशिक्षक →
हरि खड्का विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भाद्र १, २०७८
एपिएफ आहा! रारा गोल्डकपको फाइनलमा भाद्र १, २०७८
मौरिसस विरुद्ध बन्द प्रशिक्षणमा रहेका सबैलाई अवसर भाद्र १, २०७८
दीप ज्योतीलाई जिल्ला लिगको उपाधि भाद्र १, २०७८
रशिला बिश्व वरियताको ७ औं स्थानमा भाद्र १, २०७८
नेपाल विरुद्ध मौरिससः एक तिहाई दर्शकले रंगशालामा प्रवेश पाउने भाद्र १, २०७८